Gawaarida Tareelayaasha & Basaska Fariinka goosta oo maalin kasta Caalamka si Live ah loogu dhamaado (Halkaan ka Daawo Muuqaal ahaan 10-kii Shil ee ugu xumaa sanadkii tagay) !!!!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: January 10, 2013, 11:56 am
Maalin kasta Caalamka waxaa ka dhaco Shilal halis ah oo inta badan qabsada gawaarida qaasatanÃƒâ€šÃ‚Â Baabuurta waa weeyn ee loo yaqaan Tareelayaasha Xamuulka qaada iyo Basaska dalxiiska oo inta badan ay racaan dad aad u faro badan oo gobolada iyo Miyiga u daawasha taga.
Shilalka Caalamka ugu halista badan ayaa bil kasta waxa ay ka dhacaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareeykanka oo dhamaantood caan ku noqday Shilalka halista ah maadaama dalalkaan dadka ku nool iyo Gawaarida is bar bar yaaceeysa ay aad u fara badan yihiin .
Waxaa jira Telefishino caan ah oo soo aruuriya ama bandhiga Shilalkii ugu xumaa ee sanadkii tagay ee 2012-ka, ka dhacay Dunida kuwaas oo ay ku halaagsameen dad aad u fara badan halka qaar kale si nasiib iyo dirqi ah ku fakadeen.
Halkaan Riix ka Daawo si Live ah 10-kii Shil ee ugu xumaa laguna halaagsamay ee dhacay sanadkii tagay.